မန္တလေးက ထမင်းဆီဆမ်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မန္တလေးက ထမင်းဆီဆမ်း
Posted by ရွှေတိုက်စိုး on Mar 13, 2012 in Creative Writing | 43 comments
ဖိုးတင်ချင် မန်းလေးရောက် အမှတ်တရ
ကျွန်တော် မန်းလေး သွားပြီး သောင်းကျန်း အဲအဲ အလုပ်သွားလုပ်တာ… မန်းလေးရောက်ရင် ကျွန်တော် မုန်.တွေလျှောက်စားတာပဲ… ရန်ကုန်မှာဆိုရင် သိပ်တောင်မစားဖြစ်ဘူးဗျ.. အိမ်မှာပဲ ခေါက်ဆွဲခြောက်နဲ. နှစ်ပါးသွားနေတာလေ…
ဒီနေ.တော့ ၂၆လမ်းထောင့်က ရွှေပြည်မိုးလက်ဖက်ရည်ဆိုင် မှာ နေ.လည်စာ သွားစားမယ်ပေါ့.. အဲဒီဆိုင်က လက်ဖက်ရည်က လဲ ကောင်းတယ်လေ…. အပြင်အဆင်ကလဲ သပ်ရပ် အလန်းလေးတွေကလဲ ပေါဆိုတော့ သွားရတာ စိတ်ကိုချမ်းသာလို….. ဟိဟိ ဒါနဲ. လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရောက်တော့ စမူဆာသုတ်လေး နဲ. ထမင်းဆီဆမ်းလေး နဲ.မှာ လက်ဖက်ရည် ပုံစိမ့် (ရန်ကုန်မှာ အဲလို ပြောရင် ဘယ်စားပွဲထို.မှ မသိဘူး) တစ်ခွက်မှာလိုက် တာ လာချပေးတော့ ထမင်းပုံလေးက လှတော့ ပို.စ်တင်ချင်တဲ့ရောဂါက ထလာတာပေါ့..
အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာ တင်တယ်ဆိုပြီး အပြစ်တင်လဲ ခံရတော့မှာ ပဲ တင်ချင်တာကိုးဗျ.. ဟိဟိ
ဒါနဲ. ဖုန်းကင်မလာလေးနဲ. ဓာတ်ပုံရိုက် (ဖုန်းရှိကြောင်းလဲ ကြွားတာ ဟဲဟဲ) ပြီး တင်မယ်ပေါ့….. အော်ဒါနဲ. ထမင်းတွေ အသုပ်တွေဓာတ်ပုံရိုက်တုန်း ဗျာ ကောင်မငယ် တစ်ယောက် ၀င်လာတာ အမလေးလေး ဇာခြင်ထောင်ပါး အနက်ကို အင်္ကျီလုပ်ဝတ်လာတာလေ….. အမလေး မြင်ရတဲ့သူ မှာ ဖြင့် အမလေးလေး…
အတိုင်းသားဗျာ… ပြောမပြောချင်ပေါင်……… အဲဒါနဲ. ဓာတ်ပုံကလဲ ရိုက်ရင်တန်းလန်း တစ်လက်စထဲ ဟဲဟဲဟဲ လိုက်တာ…
ကဲ ပုံတင်လိုက် ပြီနော်….
ဟောဗျာ ကောင်းခန်းရောက်မှ ပဲ ကော်နက်ရှင်က မကောင်းတော့ဘူးဗျာ….. ပုံတင်လို.မရတော့ဘူ…. သွားေ၇ာ.. ဟိဟိဟိဟ
နောက်မှပဲ ကြည့်တော့နော်…………. ဟီးဟီးဟီး…….
မိတိုက်တို့များ CEO နောက်လိုက်ပြီး ကောင်းစားနေလိုက်တာ…
မိတိုက် မြင်တယ်မဟုတ်လား ကောင်းစားနေထာ……… မနာပါ့အေ…….
ပြောချင်လွန်းလို့ စကားလုံးတောင် ကျန်ခဲ့တယ်………….. မနာလိုပါ့အေ……………..
မတိုက် မတိုက် လက်ဖက်ရည်က အမြုပ်လေးတွေထနေတယ်နော် အဟိ အဟိ …………. နယ်မှာတော့ ထမင်းဆီစမ်းက တစ်ကယ်ခေတ်စားတယ် ပုဂံသွားတုန်းကလည်း မနက်တိုင်းစားဖြစ်တယ် နယ်ဘက်အစား အစာတွေက ကိုယ်မစားတတ်တော့ ဒါပဲမှာစားမိတယ် …. မတိုက်ပြောသလို ရန်ကုန်ကအခေါ်အဝေါ်နဲ့ နယ်က အခေါ်အဝေါ်မတူတော့ ကိုယ်စားချင်တာနဲ့ ကိုယ်မှာတာတစ်ခြားစီဖြစ်ဖြစ်သွားတယ် ….. ဒါနဲ့သိတာလေးပဲ မှာစားနေရတယ် ပုဂံကနေ ကျောက်ပန်းတောင်ရောက်တော့လည်း ထမင်းဆီစမ်းပဲစားတယ် …..ကျောက်ပန်းတောင်းကနေ နေပြည်တော်အသွားလမ်းမှာလည်း ဒါပဲမှာစားတယ် …. အခုတော့ နေ့ခင်းဆိုတော့ မစားချင်သေးဝူး ……..အအေးသောက်ချင်တယ် ……….
အအေးသောက်ချင်ရင်မှာပေးမယ်လေ… ဟေ့ဟေ့ရှူးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ညီလေ ကရင်ဆော်ဒါ တစ်လုံးလောက် အခိုင်ကို ပေးစမ်းကွာ….
ဗိုက်ဆာနေတာနဲ့အတော်ပဲ။ စားတာတောင် ရန်ကုန်မှာ ဘာလို့မစားတာလဲ ကျွေးရမှာစိုးလို့လား။ ရန်ကုန်က ဘော်ဒါတွေ လာလည်ရင်ကျွေးရမှာစိုးလို့ ရန်ကုန်မှာ ခေါက်ဆွဲခြောက်ပဲစားတယ်လို့ ကြိုပြီးပိတ်ပြောထားတာ ထင်ပါရဲ့….
ဟုတ်ပါဘူးဗျာ ရန်ကုန်မှာ အပြင်သွားရမှာကို ၀န်လေးလွန်းလို..အခုပိုတောင်ဆိုးသေး ခရာကြောက်ရ၊ အမျိုးသမီးသီသန်.လိုင်းကားရှောင်ရနဲ.
အပြင်မထွက်ဖြစ်တာပါ.. မန်းလေးမှာတော့ မော်တော်ပီကယ်ခရာပဲရှိတယ်… တစ်ခါမှုတ် ၃၀၀၀ ပဲ လေ…
ရွှေတိုက်စားတဲ့ ပန်းကန်တဲ့လား ..အဟက် .. အဟက် ယုံဘူး .. ကြောင်စာလောက်လေးရှိတာကို … ။
အပြင်ဆာတွေ ၀ယ်စားနေပါတယ် လို့ … အုပ်ထိန်းသူကို သတင်းပေးလိုက်မယ် …. ဟဲဟဲ
မအိတုံ စကားကြီးကလဲ အသည်းယားထာ ဟယ်…. အပြင်ဆာတွေ ဆိုတဲ့စာသားကို ဘိုးတောင်တင်ထားလိုက်သေးတယ်… အဟိ..
ဟယ်ဆွဲခေါ်လာတာမျိုး။ ပြတော့တမျိုး။ သများကအသက်အောင့်ပြီးကြည့်နေတာ။ ခြင်ထောင်ဇာများတွေ့မ လားလို့။ လူဇိုး။ ထမင်းကတော့ခုဗိုက်ပြည့်နေပြီ။ နောက်များမှ။ ဒါနဲ့စကားအတင်းစပ် ပုံစိမ့်ဆိုတာဘာပါလိမ့်။ ဘယ်ဟာကိုခေါ်တာလဲ။ ချိုစိမ့်လား။ ပေါ့စိမ့်လား။ ကျစိမ့်လား။
ပုံစိမ့် ဆိုတာ ပုံမှန် ကို စိမ့်စိမ့်လေးဖြစ်အောင် နို.စိမ်းများများထည့်ခိုင်းတာလေ… အဲဒေါ့ ပုံစိမ့်ပေါ့
နောက်ရှိသေးတယ်… ရန်ကုန်မှာ မှာလို.မရတဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေ..
လိပ်ခုတ် ….. ပလာတာ၊နံပြားကို ပဲနဲလိပ်ပြီး တစ်ခါတည်း ခုတ်ပေးထားတာ
ကြက်သံ ….. ရေနွေး၊ကြက်ဥ၊သံပုရာသီခြမ်း (အားရှိတယ်ပြောတာပဲ)
စင်္ကာပူ ……. ကော်ဖီမှုန်.နဲ.လက်ဖက်ရည် ရောဖျော်ထားတာ
ဟပ်တီး …… ခွက်လေးကသေးသေးလေ..နဲနဲနဲ.ကောင်းကောင်းသောက်ချင်ရင်သောက်
ကပ်ခွာ …. နံပြားကို ကပ်ပြီး ခဏလေးနဲ.ခွာတာ ပျော့ပျော့လေးပေါ့
ဗိုက်ဆာနေတဲ့ အချိန်ကြည့်မိတော့ တော်တော်လေး သရေကျသွားတယ်
ဒါနဲ့ ရွှေတိုက်စိုးတစ်ယောက် ဇာခြင်ထောင်ပါးအနက်ကို အင်္ကျီလုပ်ဝတ်လာ
တဲ့ကောင်မလေးကို မြင်လိုက်တော့ အမလေးလေး…ဆိုပြီး ဘာမှလဲ ဆက်မရေးပါလားနော်
နောက်ဆက်တွဲစကားကို အုပ်ထိန်းသူကို ဘယ်လိုပြောလိုက်ရမလဲဟင် ….
ဟီးဟီး မနွယ်ပင် ထမင်းဆီဆမ်းလေး စားနော် လက်ဖက်ရည်လေးသောက်ပြီး ပြန်တော့နော် ဟီးဟီး…
ရေးချင်ပါသော်လည်း အုပ်အုပ်ဖတ်မိလို. သများနဲ.တွေ.ရင် နားလေးပြန်ဆက်ထားတာမှမကြာသေး ဟီးဟီးဟီး
ပြောရင်းနဲ.တောင် မျက်စိထဲက ထွက်ကိုမထွက်ဘူး…
မမ အုံတောင်စားချင်လာပြီ။ ပြန်လာရင်ထမင်းလေးထုပ်ခဲ့ဟေ့ တိုက်ရေ။ အပြင်ဆင်လေး လှတယ်။
မမအုံ ထမင်းဆီဆမ်းကတော့ ပါဆယ်ထုပ်လို.မရဘူး သိုးသွားမှာပေါ.. ထုပ်လို.ရတာကတော့
မန်းလေးသား အလန်းလေးတွေ ပါဆယ်ထုပ်လာခဲ့မယ်.. နော်..
အပျိုကြီးအတွက် စပယ်ရှယ်.. ထမင်းဆီဆမ်းထက် သာတယ် လက်ဆောင် ဟိဟိ
မိုက်မိုက်ရယ် ခေါ်ပါဒယ် …. မိုက်မိုက်လာရင် ဇာခြင်ထောင်ထက်ပါးတာဝတ်ခဲ့နော်.. အောက်က ဘာမှဝတ်မလာနဲ.
တ်ာက ရှေ့မှာကျ တစ်မျိုး ကွယ်ရာကျ တစ်မျိုးပါလား …
ဇာခြင်ထောင်ပါး အနက်လေး … တဲ့ …
တော်က ဓာတ်ပုံရိုက်တာ ကောင်းကောင်း ရိုက်တာ မဟုတ်ဘူး။ ငမ်းလိုက်သေးတယ် ပေါ့လေ ..
တော့် သောက်ကျင့် ဘယ်တော့ ပျောက်မှာတုံး ကတိုက်စိုးရဲ့ …
ပြန်လာလို့ကတော့ ဒင်းတော့လား … အင်း .. အကြောင်း သိသေးတာပေါ့ …
(အချုပ်ထိန်းသူ ကိုယ်စား ပြောကြားလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်) …
စာတွေ အနည်းငယ် မှားယွင်းနေလို့ ပြန်လာပြောသွားပါသည် …
တာ် ကို တော်
အချုပ်ထိန်းသူ ကို အုပ်ထိန်းသူ ဟု ပြောင်းလဲ ဖတ်ပါရန် …..
တင့်ပါ ဆရာလေး တုံးတုံးချင့်..
လူဆိုး ကောင်မလေးကျတော့ မတင်ဘူး ထမင်းဆီဆမ်းကျတော့တင်တယ်
ကောင်မလေးတင်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ ကိုတိုက် စိတ်ဆိုးတယ်
ချိတ်ချိုးပါနဲ. တိုဂျီရွှေဘိုတား ရယ် တားတားက အတက်မကျေ.တေးရို. မတင်တာပါ… အဟိ..
တော်ကြာ ထမင်းဆီဆမ်းနဲ.ရောစားနေမှာဆို.လို.လေ… အာဟိ
ဒီလိုဆီဆမ်းမျိုးဆို ၁၀ ပွဲလောက်စားလို့ရတယ်
ဇာခြင်ထောင်ပါး အနက်ကို အင်္ကျီလုပ်ဝတ်လာတာတဲ့ ကောင်မလေးက ချောလား
ဇာခြင်ထောင် တောင်းမလာဘူးလား ခြင်ထောင်မရှိလို့ သများရှိမှာ
တစ်ယောက်ထဲစားသိလား ဖရဲကို သတိမရနဲ့
အောင်မာ မိဖရဲ. နင်ခေါ်ရအောင် နင်က ရှော.တိုက်နေတာကိုး အားလို.လား… ဖုန်းခေါ်ရင်ဖြင့် သူကောင်မလေးက ပဲ ခေါ်သလိုလို သများအထင်ကြီးအောင် လျှောက်ပြောသေးတယ်… ဟေဟေ
ကိုယ့်ဟာကို ရှော့ရိုက် ပြီး အချော်ဒကောက်နေတဲ့ မိဖြဲမ … ရန်ကုန်ရောက်မှ ဖြဲပြစ်အုံးမယ်.. (အင်္ကျီ) ဟီးဟီး
ဗြဲမယ့် ဗြဲ …
အက်ျီတော့ ဗြဲနေနဲ့ …
ဟိုဟာတာ ဗြဲ .. ဟိုဟာ ..
bedc ညအိမ်လာပြီးဓါတ်ပုံပေးရင်ပေး မပေးရင် မင်းပုံတွေ ရွှေစချုပ်ဆိပို့မယ်။
အောင်မငီး ခြိမ်းခြောက် ငွေညှစ်တာ ဟုတ်ဘူး .. ဓာတ်ပုံညှစ် အဲလေး ဓာတ်ပုံတောင်းတာ…
သများကို အုပ်ထိန်းသူနဲ. ခြိမ်းခြောက် ဓာတ်ပုံတောင်း နေပါတယ်ဗျို………….. ကယ်တော်မူကြပါ..အုံး အဟင့်
ဇာခြင်ထောင်ပါး အနက်ကို အင်္ကျီလုပ်ဝတ်လာတဲ့ ပုံများ ပါသလားလို့အောက်ကို ကသောကမျော ဆင်းလိုက်တာ ထမင်းတောင်နင်သွားတယ် ဓါတ်ပုံတင်ဖို့ များမေ့ခဲ့ သလားဗျာ ဟီ
အုပ်ထိန်းသူ ရှိနေ၍ အဲ့ဒိ့ အခန်းဖြတ် .. :grin:
အေဗျာ ပြောစမ်းပါ ကိုထူးဆန်းရယ် အလိုက်မသိထာ ပင်လယ်ခြင်္သေ့ကြီးက တော့.. အဲဒီအခန်းဖြတ် မဖြတ်ရင်တော့ ကျုပ် နားရွက် ပြတ် ဒါပဲ…
ဇာခြင်ထောင်ပါး အနက် က “ဒီအခန်းဖြတ်” အမိန့် နဲ့ တင် ……. ;-)
ဒါပေမဲ့ ဒါ့ပုံ ထဲက ရွှေတိုက်စိုးရဲ့ အုပ်ထိန်းသူ လေး ပုံ ကြည့်ရတာ သဘောထားကြီး တဲ့ မျက်နှာ ကြည်ကြည်လေး ။ ဒါကြောင့်လဲ မင်းက ဒီလို ရောင့်တက်ရဲ နေတာ နေမှာ။
ဒါနဲ့ ထမင်းဆီဆမ်း မှာ ပဲပြုတ်လေးတွေ ကြည့်ရတာ အားငယ်စရာ ပါလားဟယ်။
အလုံး နှစ်ဆယ် တောင် မပြည့်ရှာဘူး။
အသုတ်က ဘာ အသုတ်လဲ? ချင်ပေါင်ကြော် လေးလဲ တွေ့တယ်။
စားချင် ….. တယ်ယ်ယ်ယ်ယ်ယ်ယ်ယ်ယ်ယ်ယ်ယ်ယ်ယ်ယ်ယ်ယ်ယ်ယ်။ :-)
ချဉ်ပေါင် sorry ;-)
အန်တီလတ်ရယ် သားဖြင့် ရောင့်တက်ပေါင်ဂျာ လိမ္မာလွန်းလို. အုပ်ထိန်းသူကတောင် ကျောတေးရယ်.. အရမ်းလိမ္မာလို. ပိုပို ဟိုဒင်းပြုလာတယ်တဲ့ လေ ငှဲငှဲငှဲငှဲ
ထမင်းဆီဆမ်းနဲ. ဘေးက အသုပ် က စမူဆာသုပ်ပါ အန်တီလတ်….. ဆိတ်သားကြင်လေး အပေါ်က အုပ်ထားတာ..
ဘေးနားမှာ ပူစီနံ နဲ. ကြက်သွန်အ၀ိုင်းလေးတွေ ၊သံပုရာသီးခြမ်းလေး ညှစ်စားရတာလေ…
စားချင်ရင် နောက်တစ်ခေါက်မန်းလေးသွားရင် အန်တီလတ်ကို ခေါ်မယ်…. လေးပေါက် ကြီးကိုဝယ်ကြွေးခိုင်းလိုက်မယ် ဟဲဟဲဟဲ
ဘိုးတော်တိုက်ကတော. မန်းလေးကိုလွမ်းအောင်လုပ်နေပြန်ပြီ ။ ကျုပ်လဲ မန်းလေးမှာ ခတ်ကြာကြာနေဘူး
တယ်ဗျ ။ အဲဒီတုန်းကထိုင်နေကျ ဆိုင်ကိုလွမ်းလွန်းလို. ရန်ကုန်မှာ မောနင်းစတားသွားပြီးစိတ်ဖြေနေရတယ်။
မှတ်မိတယ်မှတ်လား ..မင်းမင်းကျော် ဆိုတဲ.ဆိုင်လေ အဲဒီက နေ.လည်ခင်းမှာရတဲ. ကြက်နံထော ကိုခုထိ
သတိယတုန်း ။ ဦးလှထွန်း အအေးဆိုင်ရောရှိသေးလား ၊ ဖါလူဒါ ဆိုရင် ရန်ကုန်ကရွှေပုဇွန်ကိုသနားတယ် ။
မန်းသူတွေက ဟိုတုန်းကအရမ်းခင်စရာကောင်းတယ် ……မမေ.ဘူးဗျို. မမေ.ဘူး မမေ.ဘူး …….။
ဟုတ်တယ် ကိုဆာမိရေ မန်းလေးက တော့ အစားအသောက်တွေကို စေတနာ လေးနဲနဲထည့်ပြီး ရောင်းတာလေ.. အရသာကလဲ ရှိတယ် ဈေးကလဲ အသင့်အတင့်…. စားရတဲ့သူလဲ စိတ်ချမ်းသာတယ်လေ…
ကျန်တာမပြောနဲ. စားပွဲထိုးလေးတွေတောင် ရန်ကုန် နဲ.မန်းလေးသိပ်ကိုကွာတယ်ဗျာ…..
မန်းသူတွေ ခင်စရာကောင်းတယ်ဆိုပါလား…. သများတို.လဲ ခင်စရာကောင်းပါတယ်နော်.. မိဖရဲ နဲ.သများလဲ ခင်စရာကောင်းပါတယ်.. ဟွန်..
အော်ဒါနဲ. ကိုဆာမိ မန်းလေးရောက်ရင် လှေစီးပြီး ဟင်းစားရှာစရာမလိုတော့ဘူး … ဆိုင်ကယ်လေးနဲ. ည ၈နာရီလောက် ၈၄ လမ်းပေါ် ဖြေးဖြေးလေးမောင်းသွား … နောက်ကနေ ဆိုင်ကယ်တွေနဲ. ဟင်းစားတွေ အုပ်လိုက်ကြီး လိုက်လာလိမ့်မယ်……….. ဟဟဟဟဟဟ
မန်းလေးရောက်ရင်တော့ အစ်ကိုပြောတဲ့ ဆိုင်မှာ
ပီးရင် ဟတ်တီး ပေါ့ဆိမ့်လေးတစ်ခွက်နဲ့
အော်……. ရွှေတိုက်ကိုတောင် စိုးထားတယ်ဆိုတော့
ထမင်းဆီဆမ်းနဲ့၊ စမူဆာသုပ်နဲ့ လက်ဖက်ရည်နဲ့ ဒါ့ပုံကြည့်ရတာနဲ့တင် မနာလိုစရာ။
(ဇာခြင်ထောင်ပါး အနက်ကို အင်္ကျီလုပ်ဝတ်လာတာလေ… )
အဲဒါ အုပ်ထိန်းသူက ရုပ်ဖျက်ပြီး စနည်းနာ ဆင်းတာတဲ့ တော်ရေ့။
ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ရင် နားရွက်အတုတပ်ဖို့သာ ပြင်ထားတဲ့ တဆင့်စကား ပါးလို့ ပြောပေးလိုက်ပါတယ်။ :LOL:
ဟဟဟ မမ ရယ် တားတားက အုပ်ထိန်းသူရုပ်ဖျက် စနည်းနာ တယ်ဆိုတာယုံပေါင်ဗျာ.. ဘာလို.လဲဆိုတော့ တားတား အုပ်အုပ်က အဲလို မပေါ်တပေါ်ဝတ်ချင်ဘူးတဲ့… မ၀တ်မဲ့မ၀တ်တော့ ဘာမှကို မ၀တ်ချင်တာတဲ့…
အဲဒါနဲ. သူ.ကို ဟော့ရှော့ကို ၀ယ်မဆင်ရဲတော့ ဘူး အေးရော..
ပြည် မှာလဲ အဲ့လို ထမင်းဆီဆမ်းနဲ့ အမဲကြော်
စားချင်တယ်မန်းဂေဇက်အဖွဲ့သားတွေ ကျတော့မကျွေးဘူး သူတယောက်ထဲစားတယ်